FKTLM: lasan’ny vadina pasitera ny vola… | NewsMada
FKTLM: lasan’ny vadina pasitera ny vola…
Nitondra valin-kafatra. Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa tsy mitombina ny vaovao niely momba ny vola nomena ny FKTLM. « Nambaran’ny praiminisitra teo aloha sady kandidà tamin’ny fandraisam-pitenenany fa homeny vola ity fikambanana tanora eo anivon’ny FLM ity tamin’ny zaikabe natao tany Fierena, Toliara. Tsy nomeny teo no ho eo anefa izany fa ny andro manaraka, ny ampitso. Olon-kafa, vadina pasitera, anefa ny nandray izany fa tsy ny mpitahiry vola, Rakotomalala Ny Aina Dina. Izany hoe, tsy mahakasika azy ny momba izany vola izany”, hoy io loharanom-baovao io.
Tsiahivina fa notoloran’ny kandidà Rajoelina vola 10 tapitrisa Ar ny FKTLM, tamin’io zaikabe io. Nahazo vola sy fanomezana avy amin’ny kandidà hafa koa anefa ireto eo anivon’ny FTKLM ireto tamin’izany.
Na izany aza anefa, nahagaga ny maro fa tsy tonga any amin’ireo tanora izany vola avy amin’ny kandidà Rajoelina izany ary tsy mazava ny fitantanana fa mijanona ho eo an-tanan’ireo komity mpitantana. Tahaka izany koa ny vola fanampiana avy amin’ny kandidà hafa, toy ny praiminisitra teo aoha. Tsy tonga any amin’ny komity fa nafitsaky ny mpitahiry vola na efa nambara aza fa efa nalefan’io kandidà io any aminy izany.
Araka izany, tsy marina ary diso ny fielezan’ny vaovao momba ny mpitahiry vola.